I-4C, i-4A, i-4B kunye nohlobo lwe-3 Curls kunye namaphetheni kwiNwele eziMnyama zendalo.
I-BRAIDING / CROCHET HAIR
Izixhobo zokongezwa kunye neNkonzo
Ukucwangcisa & Ukuthumela
Ukwahluka kohlobo lwe-4 kunye ne-3A, i-3B okanye i-3C Textures?
Ezimbini ezibalulekileyo iintlobo zeenwele ezibukiweyo abafazi bombala banokufana okufana, ukungafani kunye nezinto eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, abo bahlobo lwe-3, kubonakala ngathi yi-wavy xa ithambile. Kodwa ngokukhawuleza xa iqala ukuyomisa ngokukhawuleza ibuyela kwimeko yayo.
Abo abanemvelo ye-4a 4b kunye ne-4c imibala yeenwele inezinye zeendlela ezikhethekileyo kunye ezihle kakhulu. Nangona kunjalo, oku kuthungwa kukunye kunzima kwaye kunzima ukunyamekela ngenxa yamaphethini akhe angqongqo.
Uhlobo lwe-4 unwele lwendalo luya kuhlala lukhuni xa lunomdaka kwaye lunamaqabunga amancinci okanye iipilisi xa zome. Ndiyathanda zonke iintlobo ezahlukeneyo zeenwele zendalo, kwaye ndivuyiswa gqitha kukuba abaninzi abafazi baqala ukufumana izandiso zabo zeenwele zendalo.
Ndiza kukwabelana nawe ezinye zezinto ezahlukileyo phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeenwele kunye namanye amathiphu amakhulu okunyamekela iinwele zakho.
Iingqongqele okanye iipilisi ziyi-curls ezinzima kakhulu apho ububanzi bee-curl zimbalwa ngamamitha emitha. Injongo yale nkcazo kukukunceda ukwazi konke onokukwazi ukufumana indlela efanelekileyo yokukhula nokugcina ixesha elide, elinqamlekileyo kunye nentloko enempilo enoba kungakhathaliseki ukuba uludwe luni.
1 Uhlobo luni lwe-3 Hair?
5 YINI I-TYPE 4 HAIR?
9 Indlela Yokunyamekela?
9.1 Ukunyuka Kweenwele Zabantu
9.1.1 Ezinye iiMveliso:
9.4 SHAMPOO & CONDITIONING
9.5 Indlela yeLOC
Uhlobo luni lwe-3 Hair?
Abo baneenwele ze-3 banamathuba amaninzi omzimba, bhinqa baze bakhanye kwizinwele zabo. Impumlo iphezulu ngokukhazimulayo. Luster u bhe kisela kwindlela ukukhanya kubonakalisa ngayo i-hair shaft. Inwele isoloko iselula, isilungisa kwaye iqondise. Iimveliso zentloko ezincinane zifuneka kuchaze ezi ngqungquthela. Ndiya kuphula umbahluko phakathi kwe3A, 3B & 3C.
Abo ba 3a iinwele unokhenketho oluhle kakhulu lwengqungquthela. Nantoni na elula ngaphezu kwe-3A iya kulawa maqela amabini. Abo abanezinwele zeenwele ze-2a-2c baya kuba namaza kwaye bangabikho. I-3a iintlobo zeenwele zendalo zihlala zikhanya kakhulu, nto leyo ithetha ukuba i-luster ephezulu.
I-3a iinwele ezibukiweyo aziqhelekanga kakuhle i-curl creams, i-oyile, ihambe kwiimeko eziqhelekileyo okanye iimveliso ze-curl eziqhelekileyo njengokuba oku kuya kuhla phantsi kweenwele kwaye kwenze ukuba kubonakale ku-ovusi endaweni ye-curly. Ukubunjwa kweenwele kulungelelanisa kunye ne-conditioner-lightweight-in conditioners.
Ezi ngqengqelo zine-barrel egcweleyo. Njengoko iinwele zifumana iipilisi ezisezantsi ukuba zihlasele kwi-"S" ukuma ngenxa yobunzima bezinwele, okwenze ukuba kubonakale kunama-wavy ngaphezu kwe-curly. Indlela efanelekileyo yokuphepha ukusetyenziswa kwemveliso engalunganga kwizinwele zakho kukujonga izithako. Ukuba izixhobo zokuqala ze-1-3 zi-oil oil okanye i-petroleum, ngokugqithiseleyo, loo mveliso iya kuphakama okanye ioli ngenxa yeenwele zakho zendalo.
Ukusuka kwam amava enzendalo, ndiyabona ukuba le ndlela yelulki ibaluleke kakhulu kulabo abanoPanishi.
Ukuchaza ezi ntlobo zokuhlamba elula kwaye uhambe kunye nekhefu lokupasa elikhanyayo kwimisebenzi engcono. Emva koko vumela izinwele ukuba zome.
ifoto yekhredithi IG: taty_froever
Abo ba 3b izinwele zinempahla efana neenwele ze-3a. Le ndlela yeswele nayo ihlala iphakamileyo kwi-luster kunye nemizimba emininzi kwaye iqhutywe kwizinwele. Umzekelo we-curl weenwele ze-3b ulula kakhulu kwaye uncinci kune-3a. Umgqomo we-curl ufana ne-Crayola marker.
I-3b iinwele apho uqala ukubona i-frizz kunye nokuqhayisa ngaphakathi kwetshathi yeenwele. Abo abaneempawu ze-3b zendalo bangadinga ukusebenzisa i-leave-in conditioners kunye nezinye iigrams eziqhelekileyo zokugcina i-frizz. Nangona kunjalo, kusekho ngqo kwaye kunzima ukuyichaza i-3b iinwele zemvelo.
Geza uhambe kwaye uhamba kunye neendlela eziqhelekileyo kulabo abane-3b. Ukuba ezi ziizinwele zakho ke zingaphantsi kwezona zinto uzenza ngayo izinwele, zichazwe ngakumbi iirelethi. Imveliso emikhulu yokuyisebenzisa kule hlobo yeenwele ifana ne-3A. Imveliso enokuthi i-glycerine kuyo isebenza kakuhle njengoko i-oyile esekelwe ngamanzi kwaye iya kunika ingcaciso ephezulu ngaphandle kokulinganisela iinwele.
Nangona nantoni na nawuphi na ubuhlanga unokuba neenwele ze-3b zengqungquthela, eziqhelekileyo zibonwa ngabantu abaxubekileyo okanye abahlaleni. Abantu abamnyama okanye ama-Afrika aseMelika adibaniswe nolunye uhlanga oluvame ukuba neenwele ezinqabileyo luya kubakho i-curl elula. Nangona kunjalo, akudingeki ukuba ube ne-biracial ukuze ube nekhompyutheni ye-3B. Geza kwaye uhambe ngokuqhelekileyo kwaye uyathandwa ngabantu abaneenwele ze-3B.
i-credit card OG: @naturalhairobsessed_
3c izinwele unesici esiyingqayizivele sokuba i-3a kunye ne-3b ayinayo. Izinwele ze-3 ziqala ukukhula endaweni yokuhla. Kuthetha ukuba kuya kuqalisa ukukhula ngokuthe ngqo kwinqanaba leenwele zeenwele, ngoko njengoko iinwele zihlala ixesha elide kwaye zinobunzima kuyo, ziya kuqala ukuwa ukudala umlo ojikelezekileyo othiwa i-curly fro.
UCorbin Bleu ngumzekelo obalaseleyo walo mbhalo. I-3c iya kufuna umxube phakathi kwe-curl cream ye-curve kunye nezinye iimveliso ezisekelwe ngamanzi. Lo ngumkhiqizo othandwayo wothando. Abaninzi bam abathengi abaneenwele ze-3c bangasebenzisa phantse nayiphi na imveliso.
Uluhlobo oluvuyayo phakathi kweelos ezibuhlungu kunye neenwele zezinyosi eziqinileyo. Le nwele iyakwazi ukufumana imveliso, kwaye iimveliso zokunakekelwa kweenwele zifunekayo ukukunceda ukucacisa iingqungquthela kwaye ugcine u-frizz ubuncinci.
Abo baneenwele ze-3c baya kuqala ukuhlamba ngaphantsi baze bahambe kunye nokufaka ukukhangela ngaphezulu kwixesha labo. Indlela eqhelekileyo yokuchaza i-3c curls iphihliwe ngaphandle njengokuhlamba kwaye iyahamba idinga ixesha kunye nemveliso.
I-curl enkulu ichaza ithuluzi le-3c iinwele yi-Denman brush. Kukho ezinye iipalile ezichaza ukubetha kwiimarike ukuba ukhethe ukususela ngoku.
Amantombazana amaninzi aneenwele ze-3c zibhekwa njengezona zona zilungileyo kwihlabathi zomhlaba xa kuziwa kubuninzi nobunzima. Ukunyaniseka kuthetha ukuthini ubuninzi beentloko ezinobunzulu kunye nobunzulu obubhekiselele kwindlela enyunyiweyo yeenwele zeenwele zodwa kunye nokudala intloko epheleleyo yeenwele zemvelo eziqhelekileyo!
ifoto yekredithi ig @simplyshumba
YINI I-TYPE 4 HAIR?
Sawubona, uhlobo lwam lwe-4 i-divas yemvelo! Ukuba ukwenzile kule post, mhlawumbi ukhangele yonke into ngohlobo lweenwele ze-4. Ewe, sikufumene. Esi sikhokelo esiphezulu ngohlobo lwe-4 Hair luhlanganisa yonke into malunga nendlela yokuchonga ukuba unolu hlobo lweenwele ze-4 ukunyamekela iinwele zakho zendlela zokukhusela. Masigxume ngqo.
Uhlobo lwe-4 izinwele lubhekiselwa kuyo i-nappy or kinky, kodwa eqinisweni, lo luhlobo lwezinwele eziphelileyo. Iingqungquthela zixinyiwe kangangokuba iinwele zengcali zibhekisela kulo njengengqungquthela. Ukholi lwendalo lukhula kwaye luphuma. Kuya kufuna imveliso emininzi kunye nokunyanzeliswa ukuze ixhomeke. Uhlobo lwe-4 unwele lwendalo luyathandeka kwaye luhlutha. I-luster ephantsi ilula ngaphandle kokuba iinwele zichazwe kwisitayela. Uhlobo lwe-4 lweenwele zendalo lunokubamba luyilo kwaye luyakuthanda umswakama. Funda kabanzi malunga i-afro ze-styles kunye neendlela.
4A iinwele enye yeepatheni ezintathu zohlobo lwe-4. Uhlobo lweswele ludala i-curl-curl ekhangeleka njenge-coil okanye i-coil encinci. Le nkcazo ibonisa xa iyenzileyo ngokwaneleyo. Amantombazana am awela phantsi kweli nqanaba angaba nelinye iphethini. Kodwa i-4a iya kuba yininzi.
Izinwele ze-4a zinama-curls amancinci okanye iikhoyili. Ubungakanani beli-curl lingaba yipencilisi xa i-hydrated ngokugcwele. Iphethini le-curl ihamba kakuhle ngokuphuma, ukuphuma kwintsimbi, amaqhina aseBantu kunye nezinye izitayela ezininzi.
Nangona ukuhlamba kunye nokuhamba kunokwenzeka ngolu hlobo, amaninzi amaninzi akhetha ukwenza eso simboli ngenxa ye-shrinkage. Ngenxa yobunzima bezinwele ze-4a zine-shrinkage ephezulu kwaye azibonisi ubude bayo obude ngaphandle kokulula, sisitayela. Izinwele ze-4a zihamba kakuhle nemveliso esekelwe kwi-glycerin. Ngokuxhomekeka kwi-porosity yezinwele zezinwele, unokudinga ukrelekrele okrelekrele ukutywina kumanzi.
umfanekiso wekredithi @tropicurlie ig
Ukuba unzima kunquma ukuba iinwele zakho ziyi-curl ene-S okanye u-z-curl oqinile mhlawumbi 4B, owaziwa njengelungelo eliphakathi. Olu hlobo lwezinwele lunomxube wee-tilly-curls okanye ze-curls ezikhululekile.
I-4b iinwele zihlala ziguquguqukayo kuneenwele ze-4C kwaye zikwazi ukuqhubeka zihamba phambili kwaye zihlale zihlala ixesha elide kunezinwele ze-4C. I-divas yam kunye neenwele ze-4b zineenwele ezinzima ngokubonakala kwekotoni xa zingachazwanga. Kuthatha umzamo omncinci ukwenzela ukuba iiphulaphu zipume.
Le nywele inomxube weekhoyili kunye neendandler Uninzi lwabafazi be-4b kunye nobunjwa kunye neendlela zokuboya iinwele zabo nantoni na. Iimpawu ze-4b ziqhelekileyo kwaye zilula ukuphula kwaye zifuna ukunyakaza okuqhubekayo.
Izindlela zokunqongophala ezantsi ziindlela ezilungileyo zokukhula nokugcina ubude. UKUTHUTHUKISWA KWEKHAYA, kwakunye ne-Afro Kinky Collection, unikezela izandiso kunye ne-clip-ins ezidibanisa ngokumangalisayo ngolu hlobo lwekhalenda.
Imboleko yeMfanekiso @2Frochicks
Izinwele ze-4C ilayishiwe kakhulu kwaye ifana ne-4b, kodwa olu hlobo lube nencazelo encinci kwaye lunokufumana amaxabiso aphezulu. Iidandlet zomeleleke i-curl komnye nomnye. Abanye abantu bathi izinwele ze-4c zinomzekelo we-az, kodwa oko kulungile. Izinwele azenzi izici ezibukhali kunye nekink endaweni yalo kuphela nje zijikeleza ngokwazo. Kodwa kuseyi-curl! Ngokomzekelo, umntu onenwele ze-4c angaba no-12 intshi yeenwele xa elulwa, kodwa kungabonakala ngathi yi-3-4 intshi ende ngexesha lokuhlamba kwendalo kunye nombuso.
Uninzi lwama-naturals we-4c aluthandi ukugqoka uhlamba. Indlela eyaziwayo kakhulu kwi-style 4c izinwele zihamba ngokugqithisa kwaye ziphuma ngaphandle xa zibonisa ubude obuncinane kwaye zigcina izinwele zoluliwe kwaye zilawulwe. Izindandatho ezincinci zivela kwi-super fine kwaye zincinci ukuba zinyame kwaye zinyanzele. Izinwele ze-4C zinezinga eliphakamileyo le-porosity, okwenza kube lula ukufumana umswakama kodwa kulula nje ukuyilahleka. Iimveliso ezisekelwe kwi-oyile zisebenza kakuhle ukutywina ukuba umswakama kwaye kwaye zikhulu kakhulu ekusebenziseni izitayela. Khangela iblogi yethu kwindlela ye-LOC! MNYE I-4C inwele yesikhumba Faka Baqinisekile ukuba bajonge njengoko benza ukuba babonakale ngokufana nokufakela kwakho.
Ukunyuka Kweenwele Zabantu
Unga se benzisa - iinwele ze-crochet ngoko unokubakhomba iinwele zakho zendalo njengendlela yokukhusela okanye ukubeka kwindawo ephezulu okanye i-ponytail yethu emva kweenwele zekinky ezibukiweyo Yindlela enhle yokongeza umthamo nobude bakho ubunwele be-afro okanye zithengisa iinklinks zezinwele zekinky.
i-kinky iqhosha le-hair clip
Nazi ezinye iziphakamiso malunga nendlela yokuphatha iifayile zakho zohlobo lwe-4 ukuze zigcine ziphuculwe, ziphilile kwaye zikhule.
Kufuneka usebenzise i-moisturizer yemihla ngemihla ukuze uhlaziye iipilisi zakho. Kuza kwenza kube lula ukulawula ukuchwetheza okukhawulezayo ekuseni. Sebenzisa enye yeemveliso ezinokucetyiswa ngasentla ukudala isitayela sakho esifuna.
Ezi mveliso zilungele ukugcina i-4C yongcoliswa ngaphandle kokwakha. Ezi mveliso zijolise ekuhlaleni izinwele ze-4C eziphathekayo kwaye zithe tye.
I-Sunny Isle Jamaican Black I-Castor ye-Oil Itshi
I-CURLS I-Blueberry Bliss Control Ukunamathisela
Ikhefu le-Shea ye-Butter In-Conditioning Repair Cream
Ngokuxhomekeke kwindlela osebenzayo ngayo, unokufumanisa ukuba uhlobo lwe-4 lwakho lufuna kuphela ukuhlamba zonke iiveki ze-1-2.
Sebenzisa i-detangler kwiinwele ezinamanci phambi kokuhlamba iinwele zakho ukuze udibanise amaqhina akho ngaphandle kokukhawuleza. Uyakumangaliswa yinto enokukhawuleza inokuyenza inwele zakho.
Sebenzisa intlanzi yohlamba emva kokuhlambulula i-detangler yakho. Gxila kwi-scalp ukususa ukwakha.
Sebenzisa i-shampoo yokuhlambulula. Enye yeenqweno zethu yi-Shea Motureture Jamaican Castor Oil Shampoo. Le shampoo ihlambulule ngaphandle kokugqithisa inwele.
Qedela nge-conditioner ekhulileyo. Vumela oku kuhlale kwizinwele zakho zeemizuzu ye-15 phantsi kwesikhephe okanye kwi-steamer yeziphumo ezilungileyo.
Yintoni eyenza "Uhlobo lwe-4 LOC Method" luhluke kuneendlela eziqhelekileyo zeLOC? Inkqubo iyafana. Nangona kunjalo, iimveliso ezisetyenzisiweyo zeenwele ze-4 zifanele zonke zibe yimveliso esekelwe kwioli.
Ikhefu lakho kufuneka libe ngowona-oyile-based based based water-based, ioli yakho ifanele ibe yioli ye-castor okanye i-coconut i-oyile, kunye ne-cream styling usebenzisa enye yeziphakamiso ezingentla.
Isilikhi okanye i-satin, bafazi! Gcina ezo zibopho ezintle zigqutywe ebusuku kunye nekhwele okanye ibhondi. Ukuba unayo ixesha, ungafuna ukuphazamisa iinwele zakho ngaphambi kokuba ulale ukululaza iileyile zakho ngosuku olulandelayo.
Izitayela zeNdalo zeNdalo zeNdalo - Lo ngumthikazi wethu oyithandayo ubheka. Efanelekileyo kwimicimbi eqhoshayo, iziganeko ezikhethekileyo okanye iinwele ezingenanto-zenzeni ngeveki yomsebenzi. Kwakhona, qiniseka ukusebenzisa yethu ezona zikhwebu ezifanelekileyo zokunyusa iinwele ukuze ungeze ubude obongezelelweyo.
I-Crochet Braids - Ezi ngokukhawuleza ziba yindlela ekhuselekileyo yokukhusela ukunyusa iinwele zakho ngaphandle kweglue okanye i-wigs. nge iibhondi, ungasebenzisa iinwele ezinje izinwele ezinqabileyo ze-yaki ngomzobo. I-Crochet braids yinto elula kakhulu, kwaye unokubukela isifundo esikhulu kuloo apha.
Ukunyusa iinwele zakho kunobungozi !?
Indlela yokuba ngumntu onobuqili
Inyaniso Ngokunyuka Kweenwele Ezibuhlungu
Ukunyuka Kwakho Inwele Yendalo
Indlela yokwenza abaqulunqa ii-Waveformers
ikaliwe 4.76 ngaphandle 5
ikaliwe 4.67 ngaphandle 5
ikaliwe 4.73 ngaphandle 5
Kinky Straight Bundle
ikaliwe 4.74 ngaphandle 5
I-Kinky Curly Bundle
ikaliwe 4.63 ngaphandle 5
ikaliwe 4.70 ngaphandle 5
ikaliwe 4.60 ngaphandle 5
ikaliwe 4.88 ngaphandle 5
ikaliwe 4.86 ngaphandle 5
Afro Kinky Ukuvalwa
2019: Yenziwe Ngothando
Joyina iVIP Club namhlanje.
Fumana i-coupon updates! Siza kukwazisa ngokuthengisa, ukunika iindlela, imincintiswano kunye nemveliso emitsha yemveliso.
Pssssttt ... Joyina INKQUBO YEZITHUBA ZEMIBUZO YOKUPHATHA?
Fumana i-20% icime 💖use Ikhuphoni yekhowudi "20off" 💖 Intengiso iphela @Midnight
Thumela i email Idilesi
Idilesi yakho yemeyile